Motorola waxay sii deyneysaa Droid X Source Code | Androidsis
Waxaan aragnay maalmo kahor sida Motorola waxay ku hirgelisaa hab nabadgelyo qaar ka mid ah terminaalkeeda Android sida Motorola Milestone ama isla Motorola Droid X loo yaqaan Isticmaalka. Nidaamkan, haddii qalabku aqoonsado rooma la rakibay oo aan la oggolayn, taleefanka ayaa dib ugu bilaabi doona habka soo-kabashada illaa roomaanta ku habboon la rakibo. Tan waxaa lagu yaqaanay imaatinka Droid X, inkasta oo sidaan dhahno ay hirgalisay terminaal mudo dheer, waxayna sababtay xoogaa buuq ah maxaa yeelay tani waxay ka dhigeysaa wax aan macquul aheyn in lagu rakibo roms caado ah.
Hadda waxaan ogaanay in Motorola ay sii deysay koodhka isha ee rom-ka terminal-kan oo qofkii doonaya uu ka heli karo bogga shirkadda u gaarka ah ee soo-saareyaasha.
Si aan runta ugu sheegno, wax walba, wax walba, dhamaan koodhka lama siinin kuwa horumariya tan iyo markii ay jiraan qaybo aan bulshada loo soo bandhigin iyo dabcan waxa quseeya nidaamka Ilaalinta adeegga meelna lagama helo.
Weli waa caawimaad weyn kuwa u heellan sameynta roomayaal kale.
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Aaladaha Android » Mobiles » Motorola » Motorola waxay sii deyneysaa Droid X Source Code
Dib u bixinta 86 dijo
Sideed u sameysaa taas anigu waxaan ku cusubahay droid x fikradna kama haysto sida wax cusub loogu rakibo droid x xitaa ma aqaano sida codka kor loogu qaado ilaa heer sare. , Waxaan ahay newbie.
Ku jawaab Relanpago86
ysDayaanna v dijo
si aad u fahamto wararka waa inaad ogaataa wax badan ama ka yar waxa barnaamijku yahay. Haddii aad rabto inaad wax yar ka ogaato, ka raadso google "luqadaha barnaamijyada wikipedia" laakiin kuwani waa arrimo xog-ogaalnimo ka badan taleefoonka laftiisa. oo ku saabsan mugga durba waa arrin adiga ah inaad gasho golayaasha. nasiib badan
Ku jawaab neyson_v
Codsiga 'Viper' waxaan kula falgalikaraan gaarigeenna